Factory Set Relay Intelligent Set - Soosaarayaasha Sirta Relay ee Sirdoonka Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Naqshadeynta All-in-One, Isku-darka IEC61850 SV & GOOSE, 6I + 4V kanaalka wax soo saar, GPS hidi iyo IRIG-B, iyo shaqooyin kale oo horumarsan
Naqshad dhan-in-One, culeys <17.5kg;
Awood Sare & Sugnaan leh 6x35A & 4x310V wax soo saar analog ah;
U hogaansanaanta IEC61850 Qiimaynta Muunadaynta & GOOS;
Moodellada maktabadda imtixaanka ee sii ballaaranaya;
Hawlaha hore ee ikhtiyaariga ah sida mitirka tamarta iyo kala-beddelka qalabka wax lagu beddelo iwm.
U hoggaansanaanta heerka IEC61850, Loo adeegsaday gudbinta ilaalinta dijitaalka, Cabbiraadda & qalabka xakamaynta, terminal caqli badan, Isku-darka Qaybta iyo nidaamka xakamaynta kaabidda iyo baaritaanka.
Taabo shaashadda iyo badhanka, si aad ula kulanto caadooyin kala duwan oo la adeegsado.
Cabbir yar, oo si sahlan loo qaadi karo.
Naqshadeynta All-in-One, Isku-darka IEC61850 SV & GOOSE, 6I + 7V kanaalka wax soo saar, GPS hidi iyo IRIG-B, iyo shaqooyin kale oo horumarsan.
Adoo buuxinaya qiimaha tusaalaha ah iyo GOOSE ee IEC61850 IEDs, Mideynta Qaybta iwm.
Saxeexa sare ee analogga, 6 × 32A iyo 7 × 130V AC ilaha.
10.4 ”shaashadda taabashada iyo kumbuyuutarka oo shaqeynaya.
Tijaabiyaha gudbinta sirdoonka, Tijaabada gudbinta, Imtixaanka gudbinta Dijital ah, Tijaabiyaha gudbinta Ilaalinta Fogaanta, Tijaabiyaha gudbinta farqiga u dhexeeya, Tijaabiyaha Relay Ilaalinta, Dhammaan Alaabooyinka